Ellicott wuxuu bixiyaa Taxanaha 370 Dragon® Dredge ee Hawlgalka Beeraha Shrimp ee Mexico - Ellicott Dredges
Ellicott wuxuu bixiyaa Taxanaha 370 Dragon® Dredge ee Hawlgalka Beeraha Shrimp ee Mexico
Ellicott hadda wuu keenay oo bilaabay Taxanaha 370 Dragon® jeexan beer shrimp ah oo ku taal Xeebta Baasifigga Mexico.
Ellicott 370 dredge waxaa ka mid ah bamka 12 "x 10", awood lagu rakibay 416 HP wuxuuna gaari karaa qoto dheer oo ah 10 mitir (33 ft).
Daaqadda waxaa helay hawlwadeen beeraley ah oo shrimp ah, kaasoo doortay Ellicott® jeexjeexa sababtoo ah sumcaddeeda isku halaynta iyo adkeysiga ee xaaladaha culus. Daaqadda waxaa loo isticmaali doonaa in meesha laga saaro wasakhda iyo ilaalinta marin-biyoodka badweynta ee quudiya dooxooyinka beerahooda shrimp.
Waad ku mahadsan tahay tayada iyo fududaynta hawlgalada iyo dayactirka, Ellicott 370 waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan Mexico. Ellicott waxa uu joogitaan xooggan ku lahaa Mexico tobanaan sano, iyadoo taageero farsamo oo maxalli ah ay siisay wakiiladooda idman ee Makisur SA